Nayakhabar.com: तपाईंको मोबाइल ढिलो चार्ज हुन्छ ? छिटो गर्न यसो गर्नुहोस्
तपाईंको मोबाइल ढिलो चार्ज हुन्छ ? छिटो गर्न यसो गर्नुहोस्
काठमडौं । आफ्नो मोबाइलक ढिलो चार्ज हुने समस्याले तनावमा हुनुहुन्छ । यदि हो भने हामी तपाईंलाई यस्तै सजिलो तरिकाबारे बताउँदैछौं । आउनुहोस् थाहा पाऔंः
तपाईंले धेरैपटक अरुको चार्जर प्रयोग गर्नुभएको होला तर वास्तवमा कहिले पनि लोकल वा युनिभर्सल चार्जरले फोन चार्ज गर्नु हुँदैन । फोनको एक्सेसरिजसँग आएको एडेप्टर नै फोन चार्ज गर्न प्रयोग गर्नुपर्छ ।
पावर सोर्स छान्दाः
कमजोर पावर सोर्सले तपाईंको फोनलाई बिगार्न सक्छ । यदि तपाईं कम्प्युटर वा कुनै वायरलेस चार्जिङबाट फोन चार्ज गर्नुहुन्छ भने तपाईंको फोन निकै ढिलो चार्ज हुन्छ । त्यसकारण सधैं प्लगमा नै फोन चार्ज गर्नुहोस् किनभने कमजोर पावर सोर्सले तपाईंको ब्याट्रि ढिला चार्ज त हुन्छ नै, यसले तपाईंको पूरा फोन नै बिगार्नसक्छ ।